Tobanka Difaac Midig Ee Ugu Wanaagsanaa Taariikhda Kubadda Cagta Oo La Shaaciyey - Laacib
HomeWararka Champions LeagueTobanka Difaac Midig Ee Ugu Wanaagsanaa Taariikhda Kubadda Cagta Oo La Shaaciyey
Tobankii difaac midig ee ugu wanaagsanaa ee dunida soo maray ayaa lasoo xulay, iyadoo lagu sallaynayo tayadoodii shaqsiga ahayd, awooddoodii, orodkooda, sidii ay u adkaayeen iyo dhiirranaantii cajiibka ahayd ee ay garoomada kusoo bandhigayeen muddadii ay heerka ugu sarreysa u ciyaarayeen.
Difaacyahannadan oo sidoo kale ahaa hoggaamiyeyaal masuuliyadda kabtanimada gacanta ku xidhay oo sii kabaysay guulahooda kubadda cagta ay ka gaadheen, ayaa waxa kaalinta koowaad ka galay halyeyga Brazil ee Cafu oo sagaal kooxood oo uu u ciyaaray wacdaro ka dhigay.
Cafu oo lagu xasuusto doorkii uu ku lahaa xulka qaranka Brazil oo uu kula guuleystay laba koob adduun oo uu midkood kabtan ahaa, ayaa waxa uu waqtigiisii ciyaareed ee ugu wanaagsanaa ku qaatay kooxaha horyaalka Talyaaniga ee AS Roma iyo AC Milan.
Waxa uu ka mid ahaa xiddigihii Brazil ee ku guuleystay koobkii adduunka 1994kii, sidoo kalena yimid finalkii 1998kii oo uu Faransiisku ka qaaday, ka hor intii aanay mar kale hananin Koobka Adduunka 2002 iyadoo uu Cafu ahaa kabtanka xulkiisa.
Intii uu garoomada ku jiray waxa kale oo uu xulka dalkiisa kula guuleystay laba Copa America, halka AC Milan uu ka caawiyey hanashada Champions League.
Kabtankii Bayern Munich iyo xulka Germany ee Philipp Lahm ayaa kaalinta labaad ee difaaca midig ee ugu wanaagsanaa adduunyada soo cidhiidhsaday. Laacibkan hore waxa uu xulka Germany kula guuleystay Koobka Adduunka 2014kii, siddeed horyaal oo uu Bayern Munich kula guuleystay iyo hal Champions League oo uu la qaaday kooxdan.
Halkan kaga bogo 10ka difaac midig ee ugu wanaagsanaa adduunyada iyo guulihii ay gaadheen:
Kooxaha: Inter Milan
1 horyaal ayuu ku guuleystay
1 Koob Adduun ayuu ku guuleystay
Kooxaha: Northampton, Liverpool, Bolton
8 horyaal ayuu ku guuleystay
4 Champions League title (European Cup) ayuu ku guuleystay
Kooxaha: Monaco, Parma, Juventus, Barcelona
2 horyaal ayuu ku guuleystay
1 European Championship ayuu ku guuleystay
Kooxaha: Como, Bari, Juventus, Barcelona, AC Milan, FC Chiasso
3 horyaal ayuu ku guuleystay
Kooxaha: Portuguesa, Palmeiras, Atletico-PR
2 Koob Adduun ayuu ku guuleystay
Kooxaha: Fluminense, Santos FC, Flamengo, NY Cosmos, California Surf
8 ayuu ku guuleystay
2 Champions League titles (European Cup) ayuu ku guuleystay
Kooxaha: EC Bahia, Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris St Germain, Sao Paulo
9 horyaal ayuu ku guuleystay
3 Champions League title (European Cup) ayuu ku guuleystay
2 Copa America ayuu ku guuleystay
Kooxaha: Talleres RE, CA Banfield, Inter Milan
5 horyaal ayuu ku guuleystay
1 Champions League title (European Cup) ayuu ku guuleystay
Kooxaha: Bayern Munich
Kooxaha: Sao Paulo, Real Zaragoza, Juventude, Palmeiras, AS Roma, AC Milan, Garforth Town
1 Champions League titles (European Cup) ayuu ku guuleystay
Daniel alves nr1 garoonka gees kagees uxureysantahay ayuu ahaa gol dhalin karo caawi karo xamaasad leh geesi ah cafu iyo lam daganaasho maad ku siiseen Zanetti Arbiloa ayaa dhaamay kii Liverpool iyo real madrid
Carlos Alberto kooxdee Ayuu Uefa Champions league ( European Cup) kula guuleestay, koox Yurub ah oo uu u ciyaaray ma aadan soo qorin mise Type error ayaa jira aan kala faa’iideesana.
Halkaan waxaa daalacda dad idinka aqoon badan, kuwa aad ka aqoon badan tihiin marka qoraalka naga saxa bal dadka isku wada mid maaha.